Blitz: Ọrụ na Ule Ibu site na igwe ojii | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 1, 2016 Mọnde, Febụwarị 1, 2016 Douglas Karr
O siri ike na-abịa na ihe atụ maka ibu a na-etinye na sava weebụ ya mere na-aga. Were ya na ị bụ sava weebụ na ndị ọbịa gị bụ ite tomato. Ọ bụrụ n’inwere nri ite ma ọ bụ abụọ, ị ga - ebu ha mfe. Kpokọta narị ole na ole na ogwe aka gị ma ọ nweghị nri ọ bụla nwere ike ị nweta ebe ha kwesịrị. Ugbu a, ọ bụrụ na ị ga-enwe ike belata oke nke ọ bụla, kesaa ha nke ọma, wee nweta enyemaka iburu ha, ị ga-enwe ike iburu ọtụtụ narị.
Sava weebụ na-arụ ọrụ n'ụzọ ụfọdụ n'otu ụzọ ahụ. Fewfọdụ narị ndị ọbịa na ihe nkesa gị nwere ike ịnwe ọtụtụ akụ iji gosipụta ma weta onye ọbịa ebe ha na-aga. Ma ikpo ọtụtụ puku ma ọ bụ iri puku kwuru iri puku na ihe nkesa na-agba ọsọ ka ọ kwụsị. Ọ bụghị na ụfọdụ ndị ọbịa nwere ike ịga ebe ahụ, ụfọdụ agaghị enwe ike… ha niile kwụsịrị. Ibe akwukwo gi na-egosiputa nwayọ nwayọ na ọbụnadị ịkwụsị kpam kpam. Ọ bụ ihe anyị saịtị na-ata ahụhụ site na izu ole na ole gara aga.
Ihe bụ nsogbu bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepe emepe ma ọ bụ tinye weebụsaịtị na sava na-enweghị ibu na ya. Mgbe ahụ, ha tinyere ya na mmepụta, ndị ọbịa bịara, ọ na-agbadata ngwa ngwa.
Iji kwadebe maka nke a, ọrụ nyocha na ibu ọrụ nnwale nwere ike inye aka. Blitz bụ arụ ọrụ igwe ojii na ọrụ nnwale ibu, enweghị sọftụwia ịwụnye. Ọrụ a na - akwado ndị ọrụ aka ruru 200,000 site na 8 dị iche iche na gburugburu ụwa (ruo 50,000 kwa mpaghara) iji nwalee ngwa gị ma ọ bụ weebụsaịtị. Nke a na - enye ndị ọrụ ohere itule ngwugwu sọftụwia dị iche iche, akụrụngwa ngwaike na ndị na - eweta ọrụ. Mee elu mee ala, ọ na-enye gị ohere ịchọpụta ịda mbà tupu ndị ọbịa abịa.
Blitz emepụtara iji nyere ndị na-etinye ngwa na ndị mmepe weebụsaịtị aka ijikwa ma nwalee arụmọrụ n'oge usoro ndụ niile. Site na mmepe, nyocha, mmepụta na arụmọrụ, ọ dị oke mkpa iji hụ na ngwa gị na-ezute ọkwa kachasị nke onye ọrụ afọ ojuju.
Blitz awade nnukwu atụmatụ maka na-aga n'ihu mma mmesi obi mmemme:
Mgbanwe azụmahịa - Ma ị chọrọ ịnwale ibe weebụ ma ọ bụ azụmahịa mgbagwoju anya, Blitz na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchọpụta ọnụọgụ ndị ọrụ ị nwere ike ịkwado.
Nzaghachi zuru ezu - Nweta nkọwapụta zuru ezu yana nzaghachi ozugbo, yana asụsụ bekee dị larịị. Akụkọ ndị nwere ike inyere gị aka imebi akụrụngwa gị, chọpụta nsogbu dị na ngwa gị ma chọpụta ma ịchọrọ ịgbakwunye sava ọzọ.
plugins - Site na ndọtị anyị maka Chrome ma ọ bụ mgbakwunye maka Firefox, na-agagharị na ibe weebụ ma na-agba ọsọ arụmọrụ. Blitz na-elekọta kuki, nyocha na ihe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya.
Automation - Site na Ruby GEM na mwekota zuru oke na sava na-aga n'ihu na sava dị ka ihe nkesa Atlassian's Bamboo CI, nnwale arụmọrụ na-akpaghị aka nwere ike hụ na ọ nweghị koodu ntinye nwere ike ibute ahụmịhe na-adịghị mma maka ndị ọrụ gị.
Oge nlekota oru na Ibu:
Nzaghachi oge nlekota oru:
Blitz nwere Development API ndị ahịa na-agba ọsọ na Java, Maven, Node.js, Python, Perl, na PHP.
Tags: wakporoigwe-ojiJavannwale ibuMavenNode.jsule arụmọrụPerlPHPPython